ActiveCampaign: Why Tagging Is Critical To Your Blog When It abịakwute RSS Email Integration | Martech Zone
ActiveCampaign: Ihe kpatara mkpado ji dị oke egwu na Blog gị mgbe ọ na-abịa RSS Email Integration
Fraịdee, June 25, 2021 Fraịdee, June 25, 2021 Douglas Karr
Otu njirimara nke m chere na ejighị n'okpuru ụlọ ọrụ email bụ ojiji nke faili RSS iji mepụta ọdịnaya dị mkpa maka mkpọsa email gị. Imirikiti nyiwe nwere njirimara RSS ebe ọ dị mfe ịgbakwunye ndepụta na akwụkwọ akụkọ email gị ma ọ bụ mkpọsa ọ bụla ị na-ezipụ. Otú ọ dị, ihe ị nwere ike ọ gaghị amata bụ na ọ dị mfe itinye nkọwa doro anya, nke emetụtara, na ozi ịntanetị gị karịa faili ntanetị gị niile.
Lee otu ihe atụ. Ana m arụ ọrụ na Royal Spa ugbu a, onye na-emepụta mpaghara na onye nhazi nke ise n'elu mmiri tankị. Osimiri a na-ese n'elu mmiri bụ ngwaọrụ ndị na-enweghị uche nke nwere ọtụtụ uru ahụ ike. Companylọ ọrụ ahụ na-eji ozi email eme ihe ole na ole ka ha wee ghara ịgha ndị ahịa ha mgbe niile. N'ihi na ha nwere ngwaahịa ndị na-elebara ndị na-ege ntị dị iche iche anya, ha na-eji ndepụta aha nke ọma iji kenye ndị na-ege ha ntị nke ọma. Kudos gị n'ụlọnga, Miri miri emi, maka ịtọ ntọala maka ọkaibe a.
Anọ m na Aaron na-agba izu na Deep Ripples iji mee ka ọnụego nzaghachi na ozi ịntanetị onye ahịa ya. Ohere izizi m hụrụ bụ na ụlọ ọrụ na-eziga ozi email dị nkenke na-enweghị atụmatụ, jiri mgbasa ozi rụọ ọrụ nke ọma, na akọwaghị atụmatụ na uru niile nke ngwaahịa ha. Echere m na nke a bụ mmeghe nke ọtụtụ ndị na-ere ahịa email na-eme n'oge a.
Ndị na-ere ahịa na-ekwenyekarị na ndị debanyere aha na-abanye ngwa ngwa site na igbe ha so nkenke email ka mma… ọ bụchaghị eziokwu. M ga - arụ ụka na ị ga - enwerịrị uche ha… mana ozugbo ha mepere email, ha ga - ewepụta oge iji pịgharịa gaa ma nyochaa email ahụ, wee lekwasị anya na mpaghara ha nwere mmasị. Jiri ohere nke onye debanyere aha gị mepee email ahụ ma mee email ogologo, na-agagharị agagharị nke ahaziri nke ọma, gbajiri n'ime ngalaba dị mkpa, nwere nnukwu onyonyo nkwado, yana oku na-aga-ime.
Site na imepụta ọhụụ, etinyegoro m ọtụtụ ngalaba - akara isiokwu na-adọrọ adọrọ, ederede preheader siri ike, iwebata / nyocha nke email, isi okwu, akara ngwaahịa na nkọwapụta, mkpọmkpọ oku iji mee ihe, vidio YouTube na-akọwa ọdịiche ha their na mgbe ahụ akụkọ kacha ọhụrụ banyere ise n'elu mmiri tankị site na blog ha. N'ime etiti, etinyekwara m profaịlụ mmekọrịta ha ka atụmanya wee nwee ike soro ha mana adịghị njikere ime ihe ozugbo taa.
Njikọ RSS Email Site Mkpado nri
Kama ịnwe ngalaba ọdịnala na email ha nke edepụtara ihe kachasị ọhụrụ, dị mkpa blọgụ, emere m anya na edere blọgụ niile ha bipụtara aha nke ọma mgbe ha dere banyere ọgwụgwọ flotation na tankị ụgbọ mmiri. Ihe inwere ike ghqta banyere WordPress bu na inwere ike igbusi otu udi ma obu mkpado-kpọmkwem RSS ndepụta site na weebụsaịtị. N'okwu a, emere m nke ahụ site na ịdọbata isiokwu ha na-akpado ugbu a ise n'elu. Ọ bụ ezie na edebeghị ya nke ọma, lee adreesị ndepụta maka mkpado:
Nwere ike ịhụ mmebi nke ndepụta mkpado URL:
Blog URL: Na nke a https://www.royalspa.com/blog/
Tag: tinye mkpado gaa URL gị.
Kpido aha: Fanye aha njirimara gị. Y’oburu na nkpado gi kariri otu okwu, obu ajuju. N'okwu a, ọ bụ naanị ise n'elu.
Nri: Tinye nri na njedebe nke URL gị ma ị ga-enweta ndepụta RSS kwesịrị ekwesị maka mkpado ahụ akọwapụtara!
Njikọ RSS Email Site Na Otu udi
Nke a ga-ekwe omume site na otu. Lee otu ihe atụ:
Nwere ike ịhụ mmebi nke ndepụta ndepụta URL (nke dị n'elu adịghị arụ ọrụ… Naanị m dere ya dị ka ihe atụ):
URL saịtị: Na nke a https://www.royalspa.com/
Category: Ọ bụrụ na ị na-edebe Atiya na permalink Ọdịdị, debe ya ebe a.
Aha otu: Fanye aha njirimara aha gị. Ọ bụrụ na ụdị gị karịrị otu okwu, a na-ewe ya ede. Na nke a, ise n'elu mmiri-tankị.
Aha ngalaba: Ọ bụrụ na saịtị gị nwere ngalaba edemede, ịnwere ike ịgbakwunye ndị nọ n'ụzọ ahụ.
Nri: Tinye nri na njedebe URL gị ma ị ga-enweta faili RSS kwesịrị ekwesị maka ụdị ahụ!
Mgbe etinyere n'ime ActiveCampaignIhe nchịkọta akụkọ email maka ndepụta RSS, isiokwu ndị ọhụrụ gosipụtara ọtụtụ:
na ActiveCampaignOnye nchịkọta akụkọ, ị nwere ike ijikwa oke, padding, ederede, agba, wdg. O di nwute, ha adighi ewebata onyonyo maka post ọ bụla nke ga - abụ ezigbo mmelite.
Ihe dị mkpa na nke a bụ ijide n'aka na edepụtara ọkwa ọ bụla nke ọma. Ọtụtụ ụlọ ọrụ m na-enyocha saịtị maka ịhapụ ịhapụ ọkwa a dị oke mkpa na data meta akọwapụtaghị, nke ga-ewute gị ma emechaa ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwebata ọdịnaya gị na ngwaọrụ ndị ọzọ site na faili RSS.
Olee Otú The New Email Design rụrụ?
Anyị ka na-eche na nsonaazụ nke mkpọsa ahụ, mana ịmalite ezigbo mma. Ọnụ ọgụgụ anyị na-emeghe na pịa-site na ọnụego na-edugarịrị mkpọsa ochie ma anyị nọ naanị otu elekere ma ọ bụ karịa n'ime email kachasị kachasị mma! M tinyekwara omume maka onye ọ bụla lere vidiyo ahụ ka anyị wee zigara ha ndị otu ahịa.
Ngosi: Abụ m mmekọ ActiveCampaign na m na-eji njikọ ahụ n'isiokwu a.
Tags: ActiveCampaignblogndepụta blogịde blọgụndepụta ndepụtaudi rss ndepụtandepụtandepụta emailndepụta urlrss nrirss ka emailndepụta nrimkpado RSS nriWordPresswordpress feed
Otu ndị na-abụghị egwuregwu nwere ike irite uru site na isoro ndị na-egwu egwuregwu egwu
Etu esi achota vidiyo Youtube na chanel gi